Ndụmọdụ maka njem na Riviera Maya | Akụkọ njem
Mariela Carril | 04/01/2022 17:00 | Emelitere ka 19/12/2021 13:48 | Atụmatụ, Mexico
Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Mexico bụ Riviera Maya. Ọ bụrụ na-amasị gị anyanwụ, oké osimiri na osimiri, nke a bụ otu n'ime ebe a na-achọsi ike na America, yabụ taa na Actualidad Viajes anyị ga-enye gị ozi na Atụmatụ maka njem na Riviera Maya.
Site na ọrịa na-efe efe mpaghara ahụ atawo oke ahụhụ mana nke nta nke nta njem nlegharị anya na-amalite ịlaghachi, yabụ detuo ihe maka njem ọzọ gị.
2 Ndụmọdụ maka njem na Riviera Maya
Bụ n'akụkụ oke osimiri nke Caribbean, na steeti Quintana Roo nke Mexico, ihe dị ka kilomita 210 na mkpokọta, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Yucatá Peninsulan. Naanị ebe a enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ 405 nke ụdị dị iche iche, na-enye ihe dị ka ọnụ ụlọ 43.500. Ma ee, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-enye usoro ihe niile na-agụnye, nke bara uru nke ukwuu.
A na-ekpuchi mpaghara ahụ a oke ọhịa nke ọkara okpomọkụ akpọnwụwo, osimiri ndị ahụ bụ ájá coral, kristal doro anya na mmiri ọkụ, nke a na-ahụkarị nke Caribbean, na dịka ala ahụ bụ nkume nzu enwere ọtụtụ ọgba n'okpuru ala ma ọ bụ ọgba, n'oge a ọzọ njem nlegharị anya.
Isi ihe na-amasị mmasị na Riviera Maya bụ Puerto Morelos, banyere 16 kilomita si Cancun International Airport na 32 si Ike otu. Ọ bụ obodo dị n'ụsọ oké osimiri, nke sitere na ịkụ azụ, nke nwere ikuku dị jụụ.
Bụkwa Playa del Carmen, Obodo kachasị mkpa na nke kasị ukwuu na Riviera, nke nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, E nwere kilomita anọ nke ebe ndị na-agafe agafe na osimiri na ọ bụ mmalite nleta nleta. Cozumel. Ebe ọzọ bụ Njem njem Port.
Puerto Aventuras bụ njem nlegharị anya na mmepe obibi nke nwere ikuku mmiri, nke nwere oke mmiri kacha mma na peninsula, ebe egwuregwu gọlfụ na osimiri mara mma. Soro ya Akumal, nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ole na ole mana ọ nwere ọdọ mmiri Yalku mara mma maka ịgba snorkeling, cenotes na okpuru mmiri dị n'ụsọ oké osimiri. N'ebe a, ị gaghị eleba anya nleta na Aktun Chen, ọmarịcha ọgba nwere ọnụ ụlọ atọ, cenote nke ya na ọtụtụ stalactites na stalagmites.
Tulum Ọ bụ kaadị ozi kacha ochie. Mpaghara ihe ochie nke dị n'ụsọ osimiri bụ foto mara mma. Obodo Mayan ochie nwere mgbidi, taa enwere ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, e nwere mkpọmkpọ ebe cobá, ihe dị ka kilomita 40 site na ya, e nwekwara ọtụtụ cenote. N'ikwu okwu banyere Cobá, ọ bụ saịtị ihe ochie nke Mayan, kilomita 90 site na ya Chichen Itza.
Maka ndị hụrụ okike n'anya enwere Sian Ka'an Biosphere Reserve, n'ụsọ oké osimiri Caribbean, Ebe Ihe Nketa Ụwa kemgbe 1987.
Ọ bụrụ na ị ga-eji ụgbọ ala aga, ị ga-eburịrị gị akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ofesi.N'ọnọdụ m, ana m ahazi ya mgbe niile na ụlọ ịgba egwu ụgbọ ala dị na obodo m, ọ bụkwa ọkachamara dị ukwuu. Inye mkpuchi ahụike kwa, n'ezie.
N'ihe gbasara ego ugbu a bụ Peso Mexico mana n'ọtụtụ saịtị ndị njem nlegharị anya, a na-anabata ha n'otu aka ahụ US dollar na euro. Ndị isi kaadị akwụmụgwọ Ha na-ahụkarị (Visa, Mastercard, American Express), mana ọ bụghị n'obere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa n'okporo ámá, yabụ na ọ na-adabara mgbe niile ịnwe pesos n'aka, ọkachasị mgbe ị na-aga njem.
Enwere ọtụtụ ATM na Cancun na Riviera Maya, ma atụkwasịla ha obi na mgbe ọ bụla ị na-ahapụ ụlọ nkwari akụ na ụdị njem a, were ego nke gị. Ị ga-achọ ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta mmiri, mkpuchi anwụ, ọrụ nka masịrị gị ma ọ bụ hapụ ntụnye. Ebe a na Mexico ihe na-emebu bụ ịhapụ 10 na 15% nke ngụkọta ụgwọ n'ụlọ mmanya na ụlọ nri, mana ọ dị mma ịlele n'ihi na saịtị ụfọdụ etinyelarị ya. Ma ee, ọ bụkwa omenala inye ndị ndu njem nlegharị anya.
Kedu mgbe ị ga-aga Riviera Maya? Ọfọn, ọ na-ekpo ọkụ na iru mmiri n'ime afọ, ma mmiri ozuzo na-ezo n'etiti May na October na site na June ruo November ọ bụ oge ifufe. Oge ọkọchị dị n'etiti Nọvemba na Eprel na ọmarịcha okpomọkụ nke ihe dịka 25ºC, n'agbanyeghị na Jenụwarị na February, abalị nwere ike ịdị jụụ. Ifufe ugwu nwere ike iweta igwe ojii na mmiri ozuzo na Disemba na Jenụwarị. Ewezuga ezumike, a na-ewere ụbọchị ndị a dị ka obere oge, yabụ enwere ọnụ ahịa ka mma yana mmadụ ole na ole.
N'akụkụ aka nke ọzọ, oge mmiri ozuzo dị n'etiti Mee na Ọktoba na mmiri ozuzo na okpomọkụ na iru mmiri. Mmiri ozuzo nwere ike ịdị ọkụ ma dị mkpụmkpụ ma mgbe obere oge gasịrị anyanwụ na-apụta. Oge kacha mma bụ n'etiti June na August na mgbe ahụ, ọnụ ahịa dị oke ọnụ ma enwere ọtụtụ ndị mmadụ. N'ikwu eziokwu, nke kachasị njọ bụ oge ifufe, site na June ruo November, ma karịsịa n'etiti August na October. Ọ bụghị na a na-enwe ifufe kwa afọ na usoro ihu igwe na-achọpụta mgbe niile n'oge ma a naghị ewepụ ihe mgbochi.
15 nde njem nleta na-eleta Riviera Maya na Cancun kwa afọ, ya mere ọ bụ ebe dị nchebe. Ee, ahụla m akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ịgba égbè na mpaghara azụmahịa ... O di nwute na ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ bụ ihe ize ndụ na anyị ga-eburu n'uche nke ahụ ma ọ dị m ka ọ bụghị ihe kpatara ịkagbu akụkụ a nke Mexico site na anyị. ndepụta ebe njem nlegharị anya. N'ihe gbasara ịkpachara anya ndị ọzọ, ị ga-emerịrị nke a na-emebu.
Dabere na njem na mpaghara e nwere ihe niile, si ụgbọ ala na tagzi maka mgbazinye ụgbọ ala na ọrụ nkeonwe. Ụgbọ njem ị na-ahọrọ ga-adabere na atụmatụ gị. Ọ bụrụ na ịga njem nlegharị anya, ị nwere ike ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ debanye aha maka njem nlegharị anya nke gụnyere enyemaka nke onye ndu na tiketi. Ọ bụrụ na ị na-aga ịzụ ahịa, rịọ maka tagzi na nkwari akụ na voila. Ọ bụrụ na ị ga-akwụsị otu n'okporo ámá, jide n'aka na ọ nwere ikike ma dozie ọnụahịa njem ahụ n'ihi na ọ dịghị mita.
Ị nwere ike ịṅụ mmiri mgbata? N'ozuzu, Ee e Ma ọ bụrụgodị na m asị ee, ọ dịghị gị mma. Ọ nwere onye chọrọ iji afọ mgbu nọrọ ezumike ha n'ime ụlọ ịsa ahụ? Na-ahọrọ mmiri karama mgbe niile.
N'ikpeazụ, Ebee ka ị ga-anọ? E nwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ niile na ha na-abụkarị nhọrọ kacha mma. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị gafere mpaghara Cancun. Ugbu a, ọ bụrụ na ị ga-aga na Riviera Maya na karịsịa Cozumel na Playa del Carmen e nwere ndị mara mma hotels dị ka Royal Hideaway Playacar maka ndị okenye naanị, ma ọ bụ Occidental na Xcaret ma ọ bụ Allegro Playacar na Playa del Carmen. Nke Otu Barcelona O nwere ọtụtụ ebe obibi na mpaghara Mexico a.
Kedu ihe agaghị efu na njem na Riviera Maya?
Gaa na Akumal Ecological Center
Snorkel na Cenote Dos Ojos
Gaa na Holbox Island, awa abụọ site na Riviera Maya. Ọ dị naanị kilomita iri anọ na abụọ n’ogologo, ma o juputara na nnụnụ ndị na-ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Ndụmọdụ maka njem na Riviera Maya